Boribory ambongadiny Janpan 440C Gunting Barber Profesioanl Gunting volo napetraka mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Janpan 440C Gunting mpanety volo Profioanl napetraka
Modely ： IC-60G-1; IC-6030TG-1
● Ny haavon'ny hety dia miankina betsaka amin'ny famolavolana kanto. Ny lelan'ny hety dia entin'ny tompo iray manana traikefa mba hahazoana antoka fa manapaka tsara kokoa ianao. Ataontsika amin'ny fontsika izany, ary mamorona ny antsipiriany rehetra amin'ny tanana izahay.
● Ity hety ity dia vita amin'ny vy maharitra 440C maharitra, manapaka milamina sy maranitra. Misy hety mihety volo 6.0 santimetatra ary hety 6.0, hety 30. Functional tanteraka, mendrika ny mividy ianao.
● Ny volo mahitsy 6.0 santimetatra dia manana lelany miendrika sabatra. Ny tadim-bolo dia manana curvature, izay azo antsoina hoe hety feno. Izy io dia mety amin'ny fametahana sosona, fanapahana tsipika ary fanapahana volo lehibe. Izy io koa dia mety amin'ny fitsaboana volo.
● Ny hety 6,0, hety 30 nify, ny endrika namboarina ho volo "V", 25-30% ny tahan'ny manify volo. Famolavolana fohy, fanokafana voajanahary sy fanidiana, fanodinana azo ovaina ary fanapahana mandroso.
● Ny tantana miolaka dia mamela ny rantsan-tànana tsirairay hiasa tsy miankina, ary hilalao malalaka kokoa ny andraikitry ny rantsan-tànana, hahatonga ny fanaovana volo ho fahafinaretana, ary mandreraka ny mitazona ilay hety mandritra ny fotoana maharitra.
● Ny visy dia mandray voanjo azo ovaina tanana, izay mety amin'ny fanitsiana ny fihenan'ny hety.
Teo aloha: Gunting mpanety trano ao an-trano manapaka ny volon'ny nosy manety ny nify 2mm
Manaraka: Gunting mpanety volo vita sokitra volamena